Torohevitra 20 handroahana ireo fiovam-po amin'ny e-varotra amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity | Martech Zone
Torohevitra 20 handroahana ireo fiovam-po amin'ny e-varotra amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity
Alarobia, Novambra 16, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Mandeha ny famantaranandro, saingy mbola tsy tara ny fampiasan'ny mpamatsy e-varotra ny tranokalan'izy ireo hanosehana fiovam-po bebe kokoa. Ity infographic avy amin'ny manam-pahaizana fanatsarana fiovam-po ao amin'ny ny tsara mamelatra toro-hevitra 17 fanatsarana matanjaka tokony hampiharinao eo noho eo raha manantena ny hampiasa vola amin'ny fifamoivoizana mividy fialantsasatra amin'ity vanim-potoana ity ianao.
Misy paikady telo lehibe tokony haparitanao hatrany izay voaporofo fa mitondra fiovam-po fanampiny ho an'ny mpiantsena fety:
Manintona ny 71% ny mpanjifa fialantsasatra maimaim-poana ny fandefasana
Manintona ny 48% ny mpanjifa fialantsasatra fiverenana mora
Manintona ny 44% ny mpanjifa fialantsasatra mifanandrify amin'ny vidiny
Torohevitra fanovana fanampiny momba ny ecommerce 17 fanampiny
Mampiroborobo ny tolotrao amin'ny daty fividianana fialantsasatra farany ambony - ao anatin'izany ny Andro Fisaorana, Zoma Mainty, Alatsinain'ny Cyber, Alatsinainy Maitso ary Andro fandefasana maimaim-poana.
Upsell sy cross-sell mba hampiakarana ny sandan'ny order eo ho eo - diniho ny tolotra toy ny fandefasana maimaim-poana amin'ny fividiananao, ny vokatra bundle, manome tolotra voafetra fotoana sy bebe kokoa.
Aza mitaky fisoratana anarana amin'ny checkout - Ireo mpividy izay tsy maintsy mameno fampahalalana fanampiny fanampiny dia mety handao ny saretiny.
Manatsara ny finday - mpiantsena maro no mikaroka momba ny finday avo lenta. Raha tsy vonona ianao dia tsy hahita.
Hamarino tsara fa mavesatra haingana ny pejy - Ireo tranonkala ecommerce dia matetika mahita ny fifamoivoizana an-tsoratra mandritra ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra. Aza avela handratra ny orinasanao ny tranokala miadana na tapaka.
Ampitomboy ny fahita matetika amin'ny mailaka - ny mpitsidika anao dia vonona kokoa hividy mandritra ny fialantsasatra. Aza adino ny fotoananao.
Handravaka! - omeo fahatsapana fety mety ny tranokalanao hampitombo ny traikefa fiantsenana mampihetsi-po. Mbola tsara kokoa aza, ampiasao ny hatsikana mba hahatsiarovan'izy ireo anao.
Amboary fanomezana ny lisitry ny mailakao - avadiho ny mpitsidika betsaka kokoa ho mahazatra. Zahao ny vidin'ny fahazoana ny mpanjifanao ary eritrereto ny fanomezana fanomezana maimaim-poana hisarihana mpitsidika vaovao.
Mamorona fahatsapana fa maika - Ny daty fandefasana farany sy ny varotra tselatra dia mety hiteraka fahatsapana fahamehana izay hanampy ny mpitsidika bebe kokoa hiova haingana.
Ataovy manintona ny fihenam-bidy - mitady fomba isan-karazany amin'ny fametrahana ny fihenam-bidy. Tokony hanao fihenam-bidy 50%, $ 25 ianao, na mividy afaka maimaim-poana?
Omeo ny fanohanan'ny mpanjifa kalitao - Ny fanampiana ny mpanjifa amin'ny fotoana mivantana amin'ny alàlan'ny chat mivantana, media sosialy, na telefaona dia afaka manampy amin'ny fandresena ireo sakana amin'ny fividianana amin'ny tranokalanao.
Ataovy mora vidiana ny karatra fanomezana - rehefa tsy manana ny hevitry ny fanomezana tonga lafatra ny mpitsidika dia safidy lehibe ny karatra fanomezana. Ataovy tsotra.
Mampiasà programa tsy fivadihana hampiverina azy ireo - Ny famerenana ny mpanjifa ampahefatra fahefatra dia afaka manampy amin'ny familiana ny varotra mandritra ny telovolana voalohany.
Manome tolotra manokana ho takalon'ny hevitra - Ny tsikera dia afaka manampy amin'ny famindrana fiovana mandritra ny taona. Araraoty ny fifamoivoizanao avo kokoa mba hampitomboana ny hevitra momba ny vokatrao.
Manolora fandefasana fandefasana maimaim-poana - ny politika famerenam-bola malala-tanana dia hampiorina ny fahatokisan'ny mpanjifa ary hamerina ny mpanjifa na dia taorian'ny fialantsasatra aza.
Ampio izy ireo hanao azy manokana - ataovy mora amin'ny mpanjifanao ny mampiditra naoty amin'ny fividianana fanomezana.
Manolora fonosana fanomezana maimaim-poana - Rehefa manolotra fonosana fanomezana maimaim-poana ianao dia manamaivana ny aretin'andoha. Arakaraky ny aretinao amin'ny aretin'andoha no mahatonga azy ireo hifandray aminao.
Ity ny infographic ecommerce feno avy amin'ny tsara
Tags: Zahao hoecross-mivarotrampanjifa fanohananafihenam-bidye-varotra infographictoro-hevitra amin'ny e-varotrafanatsarana ny fanovana ecommercetoro-hevitra momba ny ecommercemailakamailaka matetikafree returnsmaimaim-poana ny fandefasanafanomezana karatrapersonalization fanomezanafanolorana fanomezanamailaka fialantsasatradaty fividianana fialantsasatrafandaharam-pivavahanaM-varotramcommercefifanakalozana findayfanatsarana findaydaty fividianana fialantsasatra fara tamponypersonalizationfisoratana anaranafandefasana entanaupsellfahamehana
Inona no atao hoe Fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy? Izay rehetra tokony ho fantatrao!
Ahoana ny fomba tsy hahombiazana amin'ny Snapchat
Dec 2, 2016 amin'ny 1: 17 AM
Lahatsoratra tena manampy misaotra zaraina aminay.